Dowladda Yugaandha oo qorsheynaysa in ay Ciidamo hor leh usoo dirto Soomaaliya | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Dowladda Yugaandha oo qorsheynaysa in ay Ciidamo hor leh usoo dirto Soomaaliya
Dowladda Yugaandha oo qorsheynaysa in ay Ciidamo hor leh usoo dirto Soomaaliya
Agaasimaha howl-gallada nabadda Boliiska Yugaandha, Grace Turyagumanawe, oo dhowaan booqasho ku yimid Muqdisha ayaa sheegay in uu Ciidankani ka qeyb qaadan doono sugidda ammaanka Dalka Soomaaliya.
Taliye ,Turyagumanawe ayaa hadalkan ka jeediyay kulan uu Muqdisho kula qaatay Saraakiisha howl-galka midowga Afrika ee Soomaaliya, si uu ugu kuur galo heerka shaqadooda nabad ilaalineed iyo tababarrada ay bixiyaan.
Grace Turyagumanawe , ayaa yiri”Diyaar garow ayaa socda si loo hubiyo in aan geyno qayb Labaad sida lagu heshiiyay dhowaan. waxaan ka shaqeyneynaa sidii aan ku heli lahayn qalabka lagama maarmaanka ah.
Simon Mulongo, ku-xigeenka wakiilka gaarka ah ee Guddoomiyaha Midowga Afrika, ayaa kulanka ka sheegay in uu ku qanacsan yahay doorka ay Boliiska Yugaandha kaga jiraan nabad dhisidda iyo sare u qaadidda awoodda Boliiska Soomaaliya.
Ciidanka Boliiska midowga Afrika ayaa qorsheynaya in xilliga kala guurka ka hor ay Booliska Soomaaliyeed u diyaariyaan qalabkii ay ku howl-geli lahaayeen iyo tababarro dhammays tiran, si ay ammaanka Dalka iyo kala dambayntuba ula wareegaan marka ay Dalka ka baxdo AMISOM 2021-ka.
Ciidankan cusub oo aan tiradiisa la shaacin ayaa qeyb ka noqonaya Ciidamo Boliis Afrikaan ah oo horay Dalka Soomaaliya u joogay Soomaaliya, kuwaas oo ka kala socda Waddamada Uganda, Kenya, Nigeria, Sierra Leone , Zambia iyo Ghana, kuwaas oo ilaaliya xarumaha muhiimka ah tababarna siiya Booliska Soomaaliya